ဒုက္ခသည်တွေ လက်ခံစစ်ဆေးမယ့် နေရာတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ဒုက္ခသည်တွေ လက်ခံစစ်ဆေးမယ့် နေရာတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု
ဒုက္ခသည်တွေ လက်ခံစစ်ဆေးမယ့် နေရာတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းကနေ ပြန်လာမယ့် ဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံစစ်ဆေးမယ့် နေရာတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုနဲ့ အဖွဲ့က ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ကြည့်ရှုပါတယ်။
ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုနဲ့ အဖွဲ့ဟာ မနေ့က နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာ မောင်တောဒေသ မြောက်ပိုင်းရှိ ငါးခူရစခန်း မြေနေရာတွေနဲ့ တောင်ပြိုလက်ဝဲမြေနေရာတွေမှာ ပြန်လည် ရောက်ရှိလက်ခံမယ့် သူများ လက်ခံစစ်ဆေးမယ့် စခန်းမြေနေရာတွေကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ARSA အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ကြောင့် မီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ အိုးထိန်း ဟိန္ဒူကျေးရွာသစ် ပြန်လည် တည်ဆောက်မယ့် နေရာကိုလည်း သွားရောက် ကြည့်ရှုဆွေးနွေးပါတယ်။ အိုးထိန်းရွာမှာ အိမ်ထောင်စု ၇၂ စုရှိပြီး မိသားစုတွေအတွက် အနံပေ ၄၀၊ အလျား ပေ ၆၀ ရှိ နေအိမ်တွေ တည်ဆောက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
……………………. ။ ။ ……………………….
ဒုက်ခသညျတှေ လကျခံစဈဆေးမယျ့ နရောတှကေို ရခိုငျပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျ ကှငျးဆငျးကွညျ့ရှု
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ရှိ ဒုက်ခသညျစခနျးကနေ ပွနျလာမယျ့ ဒုက်ခသညျတှကေို လကျခံစဈဆေးမယျ့ နရောတှကေို ရခိုငျပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျ ဦးညီပုနဲ့ အဖှဲ့က ကှငျးဆငျးစဈဆေး ကွညျ့ရှုပါတယျ။
ပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျ ဦးညီပုနဲ့ အဖှဲ့ဟာ မနကေ့ နိုဝငျဘာ ၉ ရကျနမှေ့ာ မောငျတောဒသေ မွောကျပိုငျးရှိ ငါးခူရစခနျး မွနေရောတှနေဲ့ တောငျပွိုလကျဝဲမွနေရောတှမှော ပွနျလညျ ရောကျရှိလကျခံမယျ့ သူမြား လကျခံစဈဆေးမယျ့ စခနျးမွနေရောတှကေို ကွညျ့ရှု စဈဆေးတာ ဖွဈပါတယျ။
ARSA အကွမျးဖကျ အဖှဲ့ကွောငျ့ မီးလောငျပကျြစီးသှားတဲ့ အိုးထိနျး ဟိန်ဒူကြေးရှာသဈ ပွနျလညျ တညျဆောကျမယျ့ နရောကိုလညျး သှားရောကျ ကွညျ့ရှုဆှေးနှေးပါတယျ။ အိုးထိနျးရှာမှာ အိမျထောငျစု ၇၂ စုရှိပွီး မိသားစုတှအေတှကျ အနံပေ ၄၀၊ အလြား ပေ ၆၀ ရှိ နအေိမျတှေ တညျဆောကျပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleအမြင်အာရုံမသန်စွမ်းပေမယ့် မိုဘိုင်းဆော့ဖ်ဝဲလ် အတတ်ပညာနဲ့ အသက်မွေးနေသူ တစ်ဦးရဲ့ အကြောင်း (ရုပ်/သံမှတ်တမ်း)
Next articleလွှတ်တော်အနီး ဒရုန်းလွှတ်တင်သူတွေကို ထောင်ဒဏ် နှစ်လစီချ